UTM ကိုသြဒီနိတ်များသည်ပထဝီအနေအထားအရ Excel - Geofumadas သို့ပြောင်းပါ
UTM ပထဝီ Excel ကိုကိုသြဒိနိတ်ပြောင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, downloads,, Google Earth / Maps ကို
ယခင်ပို့စ်တွင်ကျွန်တော်ကိုသြဒီနိတ်ပြောင်းတစ်ခု Excel ကိုပြသခဲ့ကြောင်း UTM ဖို့ပထဝီ ဂါဗြေလ Ortiz ခေတ်စားလာခဲ့တဲ့စာရွက်ကနေ။
ဆိုလိုသည်မှာ UTM သြဒီနိတ် (Universal Traverso Mercator) ပုံစံရှိခြင်းနှင့်ဧရိယာကို သိ. ယခုပြောင်းပြန်အတွက်တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသော tool ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနှင့်ပထဝီလတ္တီတွဒ်အရှည်အသွင်ပြောင်း။
ဤကိုယျ့ကိုယျကို familiarizing start ကြပါစို့: Google Earth အဖြစ်, မက္ကစီကိုအတွက် Palacio က de los ပြည်နှင်ဒဏ်၏သြဒီနိတ် Google Earth ကို datum WGS489513.59 အဖြစ်အသုံးပြုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ X = 2,145,667.38, Y ကို = 84 ပါလိမ့်မယ်။ (ထိုသည်ကိုသင် UTM သင်သာ tools များ / options များဖြစ်ကြသည်ကိုသြဒိနိတ် / vista3D / LAT / ရှည်လျားပြသကြည့်ရှုရန်, မသိရပါဘူး)
ပထဝီကိုသြဒီနိတ်အတွက်, ဒီ Long ကပါလိမ့်မယ် = -8 ° -5 '' -59 "LAT = 19 24 ° '' 18" (Google Earth ပေါ်တွင်ဇယားကွက်ဖော်ပြရန်ဖို့ "အမြင် / Grid »ဖြစ်လာ)
ငါသည်သင်တို့ကိုစစ်ဆေးမှုများ၏ဤပုံစံကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာနားလည်အကြံပြု နားလည်မှု UTM ကိုသြဒိနိတ် Excel ကိုအတွက် tool ကိုထဲကပိုပြီးရဖို့။
ငါပြု ဒီစာရွက် ကြောင်း UTM မှာဖြစ်ကြောင်း Google Earth ကိုဒေတာပေးပို့ဖို့အချိန်အတန်ကြာရှာနေသူမိတ်ဆွေတစ်ဦးအလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
1 ။ ဒေတာထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အဝါရောင်လယ်ကွင်းအဆိုပါ XY ကိုသြဒိနိတ်စုဆောင်းနှင့်လည်းဧရိယာ, ဒီ, ဥပမာတစ်ခုမက္ကစီကိုအဖြစ်သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက်ဖြစ်နိုင်အောင် 16 21 ထံမှတူညီသောသြဒီနိတ်အထိဒေသများတွင်ဂရုစိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်း hemisphere နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဒေသများရှိသည်ကိုလံဘီယာ, အီကွေဒေါနှင့်ဘရာဇီးလ်၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်ကဲ့သို့တူညီသော, ကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းနှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။
ဒါ့အပြင်ထိပ်မှာ UTM သြဒီနိတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်အတူရည်ညွှန်း spheroid ဖြစ်ပါတယ်, ဒီ output ကိုသြဒီနိတ်များအတွက်မဟုတ်ဘဲ input ကိုမဟုတ်ပါ။
2 ။ ရလဒ်အထွက်
3 ။ Google Earth အဖြစ်သူတို့ကိုပို့ပေးပါ
ငါတို့သည်ပထဝီနှင့် UTM Google Earth မှ file, ဒါကြောင့်သင် UTM AutoCAD ကိုသြဒိနိတ်ပို့ချင်လျှင်, အကြည့်ကိုယူတစ်ဦး Excel ကိုပေးပို့ဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်မြင်ဘူးတောင်မှမတိုင်မီ ဤသည် Excel ကို template ကိုသင်ပြုခွင့်ပြု.
ဤတွင်သင် UTM ကိုသြဒီနိတ်ကို Geographic သို့ပြောင်းရန် template ကိုကူးယူနိုင်သည်။
ဒီနှင့်အခြားတင်းပလိတ်များမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ Excel-CAD-GIS စာမေးပွဲသင်တန်း။
ကူပွန် Google Earth ကို သေစေနိုင်သောရုံး
ယခင် Post မှ« Previous UTM ဖို့ပထဝီကိုသြဒီနိတ်ပြောင်း Excel ကို template ကို
Next Post ငါဘယ်သူကိုအရေးအသားဘို့, ဘလော့မြေပုံထားရန်လိုသလား?နောက်တစ်ခု»
109 UTM ကိုသြဒီနိတ်များသည် Excel နှင့်သက်ဆိုင်သောပထဝီဆိုင်ရာကိုသြဒီနိတ်သို့ပြောင်းရန်အတွက် XNUMX Replies
သငျသညျ egeomates သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2020 ပု
ဟိုဆေး Solorzano Pinto သူ says:
ယခင်ထင်မြင်ယူဆချက်များအားလုံးသည်အတိတ်ကာလများနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ၏ယနေ့စက်တင်ဘာလတွင်ကဲ့သို့သောမူကွဲများကဲ့သို့ပင်ထိုအခိုက်၏နည်းပညာသည်ယနေ့ခေတ်နေ့နှင့်ကွဲပြားသည်။
အောက်တိုဘာလ 2018 ပု
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုပို့လိုက်ပါပြီ သူက spam ဖိုင်တွဲအချို့ကိုအမှန်သွားသည်။
ဗီယာ Galofre သူ says:
ငါ့မော်ဒယ်ဝယ်ပေမယ့်ငါ့ကိုဘာမှမဆည်းပူးမထားပါဘူး။ သင်ထိုကဲ့သို့ Excel ၏ပေးပို့ခြင်းစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီးရနိုင်ပါသလား။
tisti သူ says:
မတ်လ 2014 ပု
စကားမစပ်, ငါသည်ဤ website ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းနှင့်ငါစိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါကအပေါ်တစ် ဦး အနေဖြင့်လက်လွတ်ဖို့ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူကကြီးလှပါတယ်။
ဘယ်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။ wonderful ဒီအံ့သြဖွယ်စားပွဲဘယ်မှာလဲ။
Luis Lara သူ says:
ဇန်နဝါရီလ 2014 ပု
g! သူ says:
ဇွန်လ 2013 ပု
ပွင့်လင်းသော သူ says:
တူညီသောဝင်ငွေယောက် cordenada မဲငါ့ကိုထိုကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောလေ့ကျင့်ခန်းရလဒ်များကို geografica အဘယ်ကြောင့်ငါသိချင်ပါတယ်
Efrain Pena Borda သူ says:
ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 ပု
Windows Vista သို့မဟုတ် Excel ကိုများအတွက်က q ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြားပထဝီသို့မဟုတ် viseversa ကိုသြဒိနိတ်ပြောင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ငါသည်ဤရန်သင့်အာရုံကိုများအတွက်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Efrain Pena Borda
ယောနသန်သည် Cardiel သူ says:
နိုဝင်ဘာလ 2012 ပု
သင့်ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာကျွန်မ (ပထဝီ UTM) တစ်ချိန်ကမှာအများအပြားကိုသြဒိနိတ်လှည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတွေးမိ။ အတော်များများက 1000 ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
ငါသည်သင်တို့၏ prompt ကိုအကြောင်းပြန်, ကျေးဇူးတင်စကားစောင့်ဆိုင်း။
အောက်တိုဘာလ 2012 ပု
ကျနော်တို့ UTM မှ GTM ပြောင်းတဲ့ template ကိုမရှိကြပါဘူး။
Pedro Luis patino သူ says:
ငါ UTM GTM တစ်ဦးနှင့်ပုံစံများကိုသြဒိနိတ်ပြောင်း personallmente exel template ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
ငါ့ကိုအကောင့်တစ်ခုအရေအတွက်ကို valorde တင်းပလိတ်များပေးပို့ပါ
Ernesto သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2012 ပု
မင်္ဂလာပါကျနော်ဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့်မှဒဿမဒီဂရီကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ Excel ကိုအတွက် spreadsheet ရှိသည်။
Jose Luis သူ says:
အဘယ်သူမျှမပြဿနာသည် template ကိုဒဿမပုံစံဝင်ကြောင်းထောက်ခံပါတယ်ထားတဲ့ကော်လံပါရှိသည်။
ချစ်ခင်ရပါသော၊ ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်မှာ MicroStation V8i ရှိကိုသြဒီနိတ်များကိုဂရပ်ဆွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ HandHeld ကကျွန်ုပ်အား LAT W89.14298 N13.71391 ဖြင့်ဒက်စီဒီဂရီများဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းယူသည်။ ကျွန်ုပ်သည် XY သို့ပြောင်းလဲရမည်။
ဒီ template ကိုပထဝီ UTM ကူးပြောင်းသောကွောငျ့, သင်ပြုချင်သောအရာကို Check သို့သော်သင်လိုချင်တာတွေသေချာအောင်အခြားတင်းပလိတ်များရှိပါသည်။
မေးခွန်းတိုက်ရိုက်ဒဿမဒီဂရီ ENTER ဖို့ဘုန်းစာရွက် BE နိုင်သလားနှင့်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 2012 ပု
ဤဆောင်းပါးမှပုဒ်မသည် UTM မှပထဝီသို့သာပြောင်းနိုင်သည်။
Vincent du သူ says:
သငျသညျပထဝီကိုသြဒီနိတ်ပြောင်း Excel ကိုအသုံးပွုနိုငျ
ဂူစတာဗိုဟာနန်ဒက်ဇ် သူ says:
အဲဒီမှာဂါဗြေလ Ortiz .exe ၏နည်းစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးစနစ်တစ်ခုမဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ငါမဆိုမှတ်ချက်တွေထားလို, သင်တို့ကိုငါအစေခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, နှုတ်ခွန်းဆက်စကား, ငါ့စာမျက်နှာအကြံပြုပါသည်။
ခရစ်ယာန် သူ says:
ဒေါက်ဂလပ် သူ says:
ဇွန်လ 2012 ပု
ကျွန်မပထဝီကိုသြဒီနိတ်မှ UTM သြဒီနိတ်ပြောင်းလုပ်ပေးအဖြစ်
အဆိုပါ template ကိုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှ
မည်သည့်,ရိယာ၊ မည်သည့်ရလဒ်များထုတ်ပေးသည်၊ သင်မည်သည့်နိုင်ငံတွင် ၀ င်ရောက်နေသည်၊ ဘာဖြစ်ပျက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသည်။ ထောင်နှင့်ချီသော nomenclature သို့မဟုတ်ဒdecမကိန်းဂဏန်းများကိုခွဲခြားခြင်းကိစ္စမဖြစ်သင့်ပါ။
Fresia သူ says:
မင်္ဂလာပါပုံစံဝယ်သူတို့ကိုငါပြောင်းလဲဖို့သြဒီနိတ်ထားပေမယ့်တိုက်ကြီးအပြင်ဘက်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။ ဒါဟာဤပုံစံထဲမှာ, ဧရိယာရှိစေခြင်းငှါငါထားသင့်ပါတယ်ချီလီမှအဲဒီဒေသမှာ 15 ဇုန်ကိုထည့်လေ့မရှိ,
မင်္ဂလာပါ Shaviola, ဒီမှာငါတို့သည်သင်တို့လိုချင်တဲ့ template ကိုဖန်တီးကြ
Geofumadas တွင်သင်သိမ်းပိုက်သည့်ပုံစံကဲ့သို့ပုံစံမရှိပါ။ တစ်ခုရှိပေမယ့်လုပ်သောအရာပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါသည်, ဒီဂရီကနေဒtoမပြောင်းလဲ။
Shaviola သူ says:
မင်္ဂလာပါကျနော်ဒဿမဒီဂရီအတွက်သြဒီနိတ်ဒီဂရီ, မိနစ်, စက္ကန့်အတွင်းကိုသြဒိနိတ်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မတ်လ 2012 ပု
သေချာတာပေါ့၊ သင့်ရဲ့သြဒီနိတ်ကမကောင်းဘူး၊ လတ္တီတွဒ်ကအီကွေဒေါနိုင်ငံကစပြီးအယ်လ်ဆာဗေးဒေါကိုရောက်တဲ့အချိန်ကတစ်သန်းကျော်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်တယ်။ ပြtheနာပုံပေါ်သောကြောင့်, ကထွက်စစ်ဆေးပါ။
BLANCA သူ says:
ဤတိုင်းပြည်တွင်လောင်ဂျီတွဒ်၏လောင်ဂျီတွဒ်၏ကွဲပြားမှုများသည် 87 °နှင့် 89 °အကြားခြားနားပြီး 13 °နှင့် 14 °ကြားရှိလတ္တီတွဒ်သည်ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
X ကို = Y ကို = 439188.2040 316859.3910 နှင့်
စံချိန်ကဒီမှာမီတာအတွက်သြဒီနိတ်, သင်ဂရုမစိုက်ပါဘူးလျှင်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ converter ကိုစမ်းသပ်ရန်။
ကြည့်ပါ၊ မီတာမှဒီဂရီအထိသြဒီနိတ် converter ကိုသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်ပေးသင့်သောရလဒ်များမှာ 89 °လောင်ဂျီတွဒ်နှင့် 13 °လတ္တီတွဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား 89 °နှင့်2°လတ္တီတွဒ် 16 ဇုံနှင့်အနောက်မြောက် hemisphere ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သည်။
MACIAS Raul Valdez သူ says:
UTM ကိုသြဒီနိတ်များဖြင့်အချက်များကိုရိုက်ထည့်ရန်လက်ခံသောဂူဂဲလ်၏နှလုံးသားလိုင်းမှာ 6.2.1.6014 (beta) ဖြစ်သည်။
: သင်ကပြောပါတယ်သော link ကို click နှိပ်ပြီး
ဒါမှမဟုတ် "အခု ၀ ယ်ပါ" လို့ပြောတဲ့ခလုတ်ပေါ်မှာ။
လူးဝစ် Gallardo သူ says:
ငါ2ဒေါ်လာနှင့်လုပ်ခလစာ converter ကိုသြဒိနိတ်ကိုလျှော့ချဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပေးပို့ဖို့ဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Cris သူ says:
ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 ပု
သေချာတာပေါ့, ကွက်ချွတ်ရ။ အဲဒီမှာရရှိနိုင်
REGVEN WGS84 UTM WGS84 ညီမျှ
မင်္ဂလာပါကျနော်အချို့သံသယရှိသည်။ UTM သြဒီနိတ်အတူတူ REGVEN ရှိပါသလဲ ငါနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီနိုငျသညျ, ဗင်နီဇွဲလားခွဲခြားထားတဲ့အတွက်ဒေသများသိရန်လိုအပ်နေသည် ??
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် download ရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ဆက်သွယ်နေသော Proxi သည် download ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ ၎င်းဖြစ်ခဲ့ပါကသင်ကစာဖြင့်အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏အီးမေးလ် template ကိုစေလွှတ်ပြီ။
ဘီလ် သူ says:
heeeey ကဒေါ်လာ2ကိုပေးပြီး Excel template ကို download လုပ်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
cyc သူ says:
ငါ 14 ဇုန်ကိုဆိုလိုတာဒါမှမဟုတ်အားလုံးဇုန်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။
ကြောင်း 14 ရန်သင့်အားဆိုလိုပါသလော
ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများ 14 အတွက်အလုပ်လုပ်?
Juan သူ says:
သူတို့ကိုငါ agradesco imformacion
ဒီဇင်ဘာလ 2011 ပု
မရနိုင်ပါ၊ Google Earth သည် UTM ပုံစံဖြင့်သြဒိနိတ်ထည့်သွင်းခြင်းကိုလက်မခံပါ။ အများဆုံးလက်တွေ့ကျသည်မှာ၎င်းသည် Microstation, gvSIG သို့မဟုတ် QGis ကဲ့သို့သော GIS အစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကို Google Earth တွင်ကြည့်ရှုရန် kml သို့တင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
Enrique Arizabalo သူ says:
ဟေ့ငါသညျဤ coordinate စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုကိုငါ့ UTM ကြိုတင် gradesco ကူညီရန် Google Earth မှဝင်ငွေကိုသြဒိနိတ်ဘယ်လိုသိရန်လိုသည်။
အောက်တိုဘာလ 2011 ပု
Hi Miguel သင်၏မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။
- Google Earth ပြသထားသောကိုသြဒီနိတ်များနှင့်သင်ရည်ညွှန်းသောအရာများသည် UTM ဟုလူသိများသည်။ ဤစနစ်သည်တိုက်ကြီးကိုတိုင်မှတိုင်သို့တိုင်သွားသော 60 ဇုန်များအဖြစ်၊ အရှေ့ ဦး တည်ချက်တွင်ဇုန်တစ်ခုစီသည်အလယ်အလတ်တန်းစားအဖြစ်6ရှိပြီး ၄ င်းသည်ဇုန်၏အကန့်အသတ်သို့ရောက်သည်အထိတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ချခြင်းကြောင့်အရှေ့သြဒီနိတ်သည်ဇုန်တစ်ခုစီတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အခါမျှအနုတ်လက္ခဏာမပြပါ။ မြောက်အဓိပ္ပာယ်တွင်အီကွေတာမှသုညမှမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်အီကွေတာသို့ရောက်သည်အထိတိုင်မှစတင်သည်။
ဤစနစ်သည်ဇုံတစ်ခုထက်မကသောနိုင်ငံများတွင်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကိုလံဘီယာတွင် 17, 18 နှင့် 19 ဇုန်များအကြားရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မြောက်ပိုင်းခြမ်းရှိအပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်း hemisphere တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိခြင်း၏ထူးခြားမှုရှိသည်။
ဒါနိုင်ငံများတွင်ဒီရှုပ်ထွေးမှုကိုလျှော့ချရန်, မှားယွင်းသောမူလရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်, ဒါကြောင့် Google Earth ဖေါ်ပြခြင်းကိုသြဒီနိတ်ကိုက်ညီဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
Miguel သူ says:
IGAC (IGAC) ကနေထုတ်လုပ်ကိုလံဘီယာ၏မြေပုံတွင်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့မြေပုံသြဒီနိတ် Google Earth ၏မြေပုံသြဒီနိတ်မကိုက်ညီပါဘူး:
ဥပမာအားဖြင့်, ကိုလံဘီယာ၏မြေပုံသြဒီနိတ်မှပဲတောင်ဘက် Puerto Wilches 1021223E, 1302614N တစ်ခုအတိအကျကိုအစက်အပြောက်အဲဒီကိုသြဒီနိတ်မဟုတ် Google Earth ၏မြေပုံနေရာချထားပေးနိုင်နေရာချထားဖို့, ဒီခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်မည်နည်း
ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာမြေမြေပုံမှယူပြီးသိလိုသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည့်Nariñoဌာနမှအနောက်နှင့်အရှေ့သို့သွားသောသြဒီနိတ်များသည် Tumaco ၏အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ 748650 E တွင်သာတည်ရှိသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်တူသြဒီနိတ်များနှင့်ဆက်လက်တည်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အရှေ့ကို ဦး တည်သည် 833969E သို့ရောက်သော်၎င်းသည်အနည်းငယ်နောက်မှ 166030E သို့ပြောင်းလဲသောအခါတွင်ထူးခြားသည်။ Google Earth တွင်အီကွေတာမှမြောက်ဘက်သို့ 0.0 မှစတင်သည်၊ သို့သော် IGAC တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သြဒီနိတ်တွင်ရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် IGAC ၏ကိုသြဒီနိတ်မှ Google Earth သို့မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
ပါပလော သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2011 ပု
ဂါဗြေလ Ortis ၏လုပျငနျး၏အလွန်ကောင်းသောလိုက်လျောညီထွေငါသည် Win XP အတွက်အသုံးပြုပေမယ့်ငါ W7 ပြောင်းရန်ငါအသုံးပြုရန်ဆက်လက်နိုင်သငျသညျအကြှနျုပျကိုငါစေလွှတ်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးလျှင်,, Google Earth ဖတ်တဲ့ KML file ကိုမှမှတ်ဖြုန်းဖို့အလွန်အသုံးဝင်သည် လိုက်လျောညီထွေ။
သြဂုတ်လ 2011 ပု
သင်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ ... သူ says:
ငါဒုတိယသူတို့ကိုပြောင်းလဲရှိပါကငါသည်လည်း UTM နိုင်ပါတယ် ???
Carlos သူ says:
အော်စကာ alvarado သူ says:
ဇူလိုင်လ 2011 ပု
တူညီသောပထဝီကိုသြဒီနိတ် UTM ပြောင်းရရှိနိုင်မယ့်ပါဝါ tool ကို
ARNALDO SALAZAR သူ says:
အဆိုပါ 2011 နိုင်ပါစေ
ငါကဗင်နီဇွဲလား National Cartography ၏သြဒီနိတ်အချက်များနှင့်စမ်းသပ်ပြီးရလဒ်ကအတူတူပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဗီယာ သူ says:
ဧပြီလ 2011 ပု
Vito, UTM မှပြောင်းပြန်, ဒါမှမဟုတ် Geographic အတွက်ပြောင်းလဲခြင်းစစျဆေးနိုငျအောင် ဒီ link ကို egeomates
Vito သူ says:
နိုဝင်ဘာလ 2010 ပု
ငါဤအချက်အလက် W 14 ° 51 ′16.59 » YS 90 ° 51′ 50.1 » UTM သို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်
ကားလို့စ် သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2010 ပု
နီးပါးတိုင်းအမှု၌ပေမယ့်နည်းလမ်းများ၏ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေးသောဂရိတ်အလှူငွေ။ web ပေါ်မှာမျှဝေမှုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Andy သူ says:
ဇူလိုင်လ 2010 ပု
သူတို့ဟာ utility ကို cojonuda ဖြစ်ကြ၏
Magin64 သူ says:
ဇွန်လ 2010 ပု
1 Giga အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထက်ပိုပြီး, ဒီဘလော့ဂ်အတွက်အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, clickcidades (ပညာပေးဂုဏ်ပြုလွှာ Invent !!) UTM ဖို့ပထဝီအဆိုပါ Excel ကို spreadsheet ကို download လုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာပေးတဲ့ link ကိုမတတျနိုငျ, ဆိုလိုသည်မှာ UTM ပထဝီ, အခြို့ အထူးညွှန်ကြားချက်? ။ သငျသညျကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဗစ်တာ Ramirez သူ says:
တခါတရံအလွန်ဒေါသထွက်တတ်ပြီးဗဟုသုတကိုမျှဝေလိုစိတ်မရှိသူများလည်းရှိတတ်သည်။ သို့သော်သင်ရက်ရောကြောင်းသင်သိမြင်သည်။ သင်၏ကိရိယာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အဆိုပါ 2010 နိုင်ပါစေ
ဒီ link ကိုအလိုအရ:
Google Earth ကိုရိုးရှင်းသော cylindrical စီမံကိန်းများနှင့် Datum WGS84 ကိုအသုံးပြုသည်
အာဂျင်တီးနားသည်နှင့်အညီ 18,19.20,21,22 ဧရိယာများပါဝင်သည် ဒီ link ကို
Mercedes သူ says:
ငါ BS ။ အမျှ၏ပုံရိပ်တစ်ခု georeference ရန်ရှိသည်။ , အာဂျင်တီးနား Google Earth ကနေယူအချက်များနှင့်အတူ, တစ်စုံတစ်ဦးကို Google Earth နှင့်အာဂျင်တီးနားဧရိယာသုံးပြီး spheroid နှင့် datum သောအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်း ERDAS ငါ့ကိုဒီဒေတာကိုမေးဖို့ georreferenciacion စေ။
ဧပြီလ 2010 ပု
သင်တန်းအတွက် ဒီ link ဂါဗြေလ Ortiz သင်ကဖော်မြူလာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Rodrigo သူ says:
မင်္ဂလာပါ။ အလွန်ကောင်းသောပံ့ပိုးမှုများ။ သို့သျောလညျးသငျသညျအကြှနျုပျကိုဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းကလုပ်ဖို့ပုံသေနည်းပေး?
Alonso သူ says:
ဇန်နဝါရီလ 2010 ပု
benancio သူ says:
ဒီဇင်ဘာလ 2009 ပု
utm ပထဝီကိုသြဒီနိတ် converter ကို။
ရော်နယ်အောင်နိုင် သူ says:
ငါထို့နောက်အခြားဧရိယာ၌ UTM မှဖြစ်ပျက်လျှင်, ယူ, ဖြစ်ကြပြီး well'll အခြားဧရိယာမှာသူတို့ကိုရှိသည်အဖြစ်တစ်ပထဝီဖြစ်လာရသောနယ်မြေညွှန်ပြခြင်း, Excel ကိုစားပွဲပေါ်မှာအတွက်သြဒီနိတ် copy, သင် UTM ခန့်မှန်း ပထဝီကိုသြဒီနိတ်နှင့်စပျစ်သီးပျဉ်အခြားဇုန်ရွေးချယ်ရာတွင်, UTM ကူးပြောင်း။
မင်္ဂလာပါကျနော် 16 ဧရိယာ၌ UTM မှာယူဒေတာအစုတခုရှိပေမယ့်ကျွန်မလုပ်ပေးဘယ်လိုဇုန် 15 မှပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 2009 ပု
မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိကိုသြဒိနိတ်တစ်ပထဝီနှင့်တစ်ဦး UTM အကြားကလိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျပြောင်းလဲခြင်းစေရန်သီအိုရီကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုလျှင်, ဂါဗြေလ Ortiz ဒီဆောင်းပါးမှာပါကရှင်းပြသည်။
ramdwing သူ says:
အလွန်သင့်ရဲ့ technique ကိုအကောင်း, ဒါပေမယ့်ငါပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်မလိုအပ်ပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မဟုတ်ငါသည်မြေဆီလွှာနှင့်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလေ့လာနေကျောင်းသားတိရိစ္ဆာန်ထုတ်လုပ်မှု stoy အင်ဂျင်နီယာငါကဒီအမှု၌ငါတွက်ချက်မှုပြသနှင့်ဤနှစ်ခုကိုသြဒီနိတ်အကြားအမှားဆုံးဖြတ်ရန်မတောင်း သူတို့ကိုသင်ပါစေအဖြစ်။ ငါကကူညီနိုင်မည်နည်း အရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကိုသြဒီနိတ်အကြားအမှားတွက်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် !!
ကိုလံဘီယာအတွက် 17,18 19 ဒေသများတိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့်, သင်သည်ထိုဒေသတွင် Google Earth တွင်သက်ဆိုင်ရာမြင်
အမည်မထုတ်ဖေါ်သော သူ says:
မင်္ဂလာပါ။ သူတို့ကိုအပြားဖြစ်ဘို့ပထဝီကိုသြဒီနိတ်၏ဒေတာဘေ့စ Enter ပေမယ့်ငါရရလဒ်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိပါ။ ငါကိုလံဘီယာအတွက်ကိုသြဒိနိတ်မှအသွင်ပြောင်းလိုအပ်သည်။ ငါဘာလုပ်သင့်ငါပြောင်းလို့ရပါသလား
Lambros သူ says:
ဟဲလို! Plex.Mark နှင့်အတူ! သငျသညျ Google Earth ၌သင်တို့၏သြဒိနိတ်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
ဒံယလေက သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2009 ပု
Hello! မည်သူမဆိုငါပေမယ်ဒဿမအတွက်မဟုတ်ဘဲမိနစ်သို့မဟုတ်စက္ကန့်အတွင်း (ဒီဂရီ) Geograficas မှ UTM ကနေသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သိကြ၏။
အဲဒီမှာငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု Excel ကိုအတွက်မဆို tool ကို?
သင်၏အချိန်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ပိုကြီး egeomates တစ်ချိန်က .. !
ကြီးမားခြင်းနှင့်ဂါဗြေလ Ortiz egeomates, အခြားသူများကူညီပေးနေ၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ပီရူးကနေနှုတ်ခွန်း .. !
Gerald ကို C သူ says:
သြဂုတ်လ 2009 ပု
ကောင်းသောအကျင့်သင့်အချက်အလက်ကိုနှင့်အတူအချို့သော YEARS စေအိုင်တီတော်တော်လေးကောင်းသောအမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အလွန်ကောင်းသည် IS ငါညှိနှိုင်းရေးမှူး UTM သို့မဟုတ်ပထဝီတစ်ဦးကလေယာဉ်ပျံမှေူပာင်းလဲရေးကိုနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသည်, သောခြေစွပ်အခြေခံတိုက်ရိုက်လှုပ်ရှားမှုအတွက် OR လေယာဉ်ဖြင့် FIELD ကြံစည်ဖို့လိုအပ် IS FIELD နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ UTM သြဒီနိတ်သို့မဟုတ်ပထဝီသင်တန်းများနှင့်အသစ်အမှား UTM သြဒီနိတ်အတည်ပြုရန်နီးစပ်သူဒေတာတွေ Point, OJALA ငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်
လောကီ သူ says:
ဇွန်လ 2009 ပု
အဘယ်သူကိုမှငါမဆို point ရဲ့ပထဝီအနေအထားနှင့် UTM သြဒီနိတ်ဘို့ခွင့်ပြုမယ့်စာမျက်နှာ၏လိပ်စာထားခဲ့ပါကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်:
ဧပြီလ 2009 ပု
UTM Flayer အများဆုံး Zonums အစီအစဉ်များကြောင်းလမ်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ, ကုန်ဆုံး။
သင်နှင့်အတူစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများပြုနိုင်သည် Excel ကို template ကို
Friend Oliver, NOD 32 သည် 30 ရက်ထက်ပိုပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင် ၀ ယ်ရန်စာမျက်နှာကိုသင်ရှာဖွေနေလျှင် -
သငျသညျသက်တမ်းကုန်ဆုံးမပါဘူးတဲ့အခမဲ့ antivirus ကိုလိုလျှင်, Avira ကြိုးစားကြ
ဂျေမှာ Oliver Garcia Rizo သူ says:
သူတို့ကသင်တို့ကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ESET ညိတ် antivirus ကို 32 ၌ငါ့ကိုရဖို့ငါ့ကိုလက်မခံကြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာကွာပေးသော်လည်းမှာ google အပေါ်ဤစကားဝိုင်းများဖျော်ဖြေဖို့တစ် UTM Flyer အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကုန်ဆုံးခဲ့, သင်ငါနှင့် brindarmelo ကိုကူညီနိုငျ, ဒါသူတို့သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြပါဘူး။
နီကာရာဂွာ 16 နှင့် 17 ဇုန်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခုနှစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုကူညီနိုင်သည်။
ငါက Google Maps ကိုမှ UTM NAD + လွှဲပြောင်း 27 Geografica ဗဟိုကိုသြဒိနိတ်ဖို့ UTM Flyer Program ကိုရဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်
ဆိုလိုသည်မှာတောင်ပိုင်းခြမ်းရှိဇုန် 18၊ x = 338552 y = 9065052 ။ template ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ သင်တစ် ဦး datum သိမ်းပိုက်ပါလိမ့်မယ်။
mauro Jimenez Nartel သူ says:
UTM CORDENATES ကိုပထဝီဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဒေတာများသို့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။
တောင်လတ္တီ UTM 9065052
တောင်ဘက်လတ္တီ UTM 9065052
မတ်လ 2009 ပု
ငါမာရီယို Sanchez ကနေအီးမေးလ်တစ်စောင်ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အလျင်စလိုလုပ်ဖို့ကိုပြောထားသည် (ဂျီပီအက်စ်-GPRS လည်ဆွဲတို့ကသိုးစားကျက်၏အပြုအမူကိုလေ့လာသည်) အလိုအလြောကျ sexagesimal မှဒဿမဒီဂရီကနေသွားကြဖို့စားပွဲတစ်စီးရီးကဆက်ပြောသည်ဆည်းပူးနှင့်ဤင့် ရလဒ်တိုက်ရိုက်ဒီ post မှာပြထားတဲ့ template ကို egeomates သို့ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
lorenia သူ says:
Excellent က tool ကိုဂုဏ်ပြုလွှာ
ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 ပု
အဆိုပါ nomenclature ဂဏန်းတွက်စက်ဂါဗြေလ Ortiz ကမေးတယ် Revises
434156.35 4804758.33 102.44 (ကလိုင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအနေအထား, ပထမဦးဆုံး X နှင့်ထို့နောက် Y ကို-Z ကိုရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်။ )
X နဲ့ Y ကိုသြဒီနိတ်ခွဲခြားရန်အလွတ်တစ်ခုသို့မဟုတ် tab ကိုအသုံးပြုပါ, အဘယ်မှာသက်ဆိုင်သော Z.
JAVIER Cruz သူ says:
ငါသြဒီနိတ် X ကိုပြောင်းလဲတောင်း Y ကို UTM ကိုသြဒိနိတ်
ငါ« Gabriel Ortiz »၏အက္ခရာဂဏန်း COV CONVERSOR တွင်အချက်အလက်များကိုငါထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါနှိုင်းယှဉ်သောဒေတာပစ်မထားဘူး။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒေတာနေသောခေါင်းစဉ်: X ကို = 622,552.17 / 2,062,181.26 Y ကို =
ပြန်လည်ပေးပို့ရမည့်အချက်အလက်များမှာ - N 64 ° 24 ′46.02″ E ဖြစ်သည်
ငါသူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်: 15 Campeche, Mex မှသက်ဆိုင်ရာ။
Alfonso သူ says:
အောက်တိုဘာလ 2008 ပု
ဤကွီးစှာသောအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ converter နဲ့အကောင်းဆုံးသင်ကြားမှုနည်းလမ်းမပို။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 2008 ပု
Luis Felipe သူ says:
အဆိုပါ 2008 နိုင်ပါစေ
ဒီသင်ကြားမှုနည်းလမ်း exclente ။ ဒီအီးမေးလ်ပို့ပါ။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါကဲ့သို့သောတစ်ခုအလုပ်သင်သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ ud ။ သူတို့ကငါ့ကိုရန်ဤအီးမေးလ်ကိုပို့ဖို့ယဉ်ကျေးကြမလဲ? အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်အကောင်းဆုံးသူတို့အားငါသည်ပညာရှိ၏ဟုenseñaznaရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း။
ဧပြီလ 2008 ပု
anahí, ဒီ post သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးဘိုလီးဗီးယားအဖြစ်ကို Southern hemisphere အတွက်မေးမလျှောက်သောစံနမူနာ
Adriana သူ says:
သင် Menu ကို / ကြည့်ရန် / Grid ဇုန်အတွက်ထားမယ်ဆိုရင်သင် UTM Tools များ / Options ကို / ကြည့်ရန် 3d activated ပါပြီပေး, ပေါ်လာပါသည်။
anahí သူ says:
19, 20 နှင့် 21 ပန်းသီးအတွက် coordenadad UTM ရဲ့အပြောင်းအလဲဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ်, ဘိုလီးဗီးယားများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုအများကြီးအထောက်အကူပြုကြောင်းကောင်းသောအမှု။
ကားလို့စ် Flores သူ says:
မတ်လ 2008 ပု
ဂုဏ်ယူပါတယ်, ကယ့်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tool ကိုနှင့်အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
orestes သူ says:
သင်ကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များစွာမရှိသောအခြားသူများအားသင်၏အသိပညာကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအတွက်ဒုတိယနေရာ၌လုပ်သောအလုပ်အမျိုးမျိုးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးသင့်ကိုပထမဆုံးချီးကျူးသည်။